ग्यास हाकार हुन् सक्छ ! खाली सिलिण्डर भर्न ग्यास उद्योगीको आग्रह – hamrosandesh.com
ग्यास हाकार हुन् सक्छ ! खाली सिलिण्डर भर्न ग्यास उद्योगीको आग्रह
नेपाल एलपी ग्यास उद्योग सङ्घले कोरोना महाकारीका कारण आपूर्ति व्यवस्थामा असहज स्थिति आउन सक्ने भन्दै खाली रहेका सिलिण्डर भर्न उपभोक्तालाई आग्रह गरेको छ।
शुक्रबार सङ्घले अपिल जारी गर्दै खाली सिलिण्डर भर्न आग्रह गरेको हो। महामारीको समयमा उपभोक्ताले ग्यासको अभाव भोग्नु नपरोस् भनेर पहिलेनै सूचित गराइएको सङ्घका अध्यक्ष गोकुल भण्डारीले बताए।
गतवर्ष कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न सरकारले आकस्मिकरुपमा ‘लकडाउन’ गरेसँगै ग्यासको हाहाकार मच्चिएको थियो। आपूर्ति नियमित हुँदा पनि उपभोक्ताले एकैपटक खाली सिलिण्डर भर्न खोज्दा केही दिन वितरणमा समस्या देखिएको थियो।
त्यतिबेला निगमको सहयोग र उद्योगीको समन्वयबाट ग्यास वितरणमा देखिएको समस्या समाधान गरिएको थियो। ‘विगतको जस्तै समस्या आम उपभोक्ताले व्यहोर्नु नपरोस् भनेर यसपटक बेलैमा सचेत गराइएको हो,’ अध्यक्ष भण्डारीले भने।
अहिले ग्यास आपूर्तिमा कुनै समस्या नरहेको पनि उनले बताए। हाल नेपालभर दैनिक एक लाख सिलिण्डर ग्यासको माग रहेको छ।
ग्यास उद्योगीसँग १५ हजार मेट्रिकटन एलपी ग्यास भण्डारण क्षमता छ। उद्योगीसँग कुल भण्डारणको ८० प्रतिशत एलपी ग्यासको मौज्दात रहेको अध्यक्ष भण्डारीले जानकारी दिए।